Bogga ugu weyn Goobaha Kirada Fasaxa ee ugu Fiican 17 | Baadh fursadaha
Dhinacyada ugu dhibka badan ee u aadidda fasaxyada dadka intiisa badan waa qiimaha hoyga. Mid ka mid ah habka la hubo ee wax looga qaban karo waa in la aado kirooyinka fasaxa. Sababtoo ah waa mid aad uga jaban iibsiga hoy ama degitaanka hoteel.
Asal ahaan, kirada fasaxa waxay wax badan ka qabtaan guryaha ama qolal ku jira guryo uu qofku kiraysan karo muddo gaaban. Waxay noqon kartaa habeen, toddobaad, ama bil. Su’aashu hadda waxay tahay…
Sidee buu qofku ku heli karaa kiro fasax?
Sida laga soo xigtay cilmibaarista, boqolaal goobood oo fasax ah ayaa hadda shaqeynaya, kuwaas oo haddii lagaa tago inaad doorato, aad wareersan tahay.
Waxaan taas u tixgelinayaa, waxaan samaynay liis ah goobaha ugu wanaagsan ee kirada fasaxa onlaynka ah oo caan ku ah adeegyada ugu sarreeya ee ay bixiso.
Maxay yihiin aasaaska kirada Fasaxa?
Kirada Fasaxa asal ahaan waxay leedahay laba nooc oo suuqyo ah. Ama waxaad kiraysanaysaa guri dhan ama qol ku yaal guri. Kiraynta guri dhan waxay la timaadaa khibrad gaar ah.
Ha ahaato koox saaxiibbo ah ama qoys weyn, waxaa jira meel bannaan oo qof walba uu ku heli karo hal saqaf. Guryahaan waxaa laga yaabaa inay yihiin kondom, aqallo, kiro, ama guryo hal qoys ah. Haddii aad rabto inaad kireysato meel bannaan oo ku taal guriga qof, waxaad caadi ahaan la nooshahay marti -geliye.
Faa'iidada tan ayaa ah inaad heli doonto fikrado fantastik ah, talooyin, iyo talo safar oo ku saabsan sida loo booqdo sida caadiga ah. Khibraddu way kala duwan tahay, dabcan.
Laakiin marar badan, waxaad bilaabaysaa inaad bulshada deegaanka ka barato marti -geliye nool. Ogaanshaha farqiga u dhexeeya labadan doorasho ayaa kaa caawin doonta inaad ogaato nooca kirada fasaxa ee adiga kugu habboon.
Maxay yihiin Goobaha Kirada Fasaxa ee ugu Fiican?
Hoos waxaa ku qoran liiska goobaha kirada fasaxa ee ugu fiican oo aad ka fiirsan karto.
Isdhaafsiga Hoyga Jacaylka
Midka ugu horreeya ee liiskayaga goobaha kirada fasaxa ugu fiican waa Airbnb. Airbnb waxa ay bixisa liis dhamaystiran oo guryo, guryo, kondhomyo, iyo qolal kiro ah meelaha ugu caansan ee loo safro.
Liiska, macluumaadka ku saabsan tirada qolalka jiifka, musqulaha, waxyaabaha muhiimka ah, iyo qiimahooda. Intaa waxaa sii dheer, goobtu waxay ku siinaysaa macluumaad kaa caawin kara inaad go'aansato ballan-qaadkaaga iyo haddii kale.
Dhanka Airbnb ayaa ah inay aqoonsato Superhosts. Superhosts waa martigaliyayaal aad loo qiimeeyo oo bixiya joogitaan weyn martida. Tilmaamahan, waad awoodaa hel khibrada ugu fiican wwaa Airbnb.
Goob kale oo ay tahay inaad tixgeliso waa Sonder. Sonder ahaan goob ahaan waxay bixisaa adeegyo kiro fasax. Goobtu waxay leedahay liiska guryaha iyo qolalka magaalooyinka waaweyn. Liisaska waxaa ku jira adeegyada kirada fasaxa ee caanka ah sida soo-galitaan aan lala xiriiri karin, jikada si buuxda u qalabaysan, iyo dhar-dhaqidda gudaha.
Waxaad ka heli kartaa cabbirro kala duwan oo qolal iyo guryo buuxa magaalooyinka waaweyn sida New York, Chicago, London, Dubai, si aan u xuso dhawr. Marka la soo koobo, Sonder wuxuu leeyahay wax kasta oo aad rabto ilaa inta hoygu khuseeyo.
XIDHIIDHKA: 10ka Makhaayadaha ugu Qaalisan Houston
Intaa waxaa dheer, Sonder wuxuu fursad siinayaa tas -hiilaad dheeri ah, sida qolalka fadhiga iyo xarumaha jirdhiska. Khasaaraha kaliya ayaa ah in dhowr fursadood oo kaliya ay diyaar u yihiin Mareykanka.
Kama hadli karno goobaha kirada fasaxa ee ugu sarreeya annaga oo aan xusin Homestay. Guriyeynta waa midda ugu wanaagsan oo bixisa adeegyo kiro fasax oo u gaar ah oo heer sare ah.
Bogga natiijada goobtu wuxuu muujinayaa aragtida khariidada iyo liis faahfaahsan dhammaan adeegyada ay bixiyaan iyo qiimahooda. Waxay kaloo siinaysaa liiska tirada qolalka jiifka, martida, qiimeynta isticmaalaha, iyo nooca guryaha.
Intaa waxaa sii dheer, Waxaad gujin kartaa sawirrada liis kasta ama ka badbaadi guryaha aad danaynayso isla markiiba bogga natiijooyinka.
HometoGo sidoo kale waxay ka mid tahay goobaha kirada guriga fasaxa ugu fiican ee aad tijaabin karto. Mid ka mid ah astaamaha gaarka ah ee HometoGo oo ka soocaya kuwa kale ayaa ah inaad ku samayn karto baaritaanno badan hal gujin.
Waxay leedahay astaamo taxane ah oo adeegsadayaashu ku dhex wareegi karaan iyo macluumaad ku saabsan qiimeynta isticmaaleha, nooca hoyga, iyo meesha aad ka sameyn karto ballansashadaada.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay miirayaal sida shaandhaynta qiimaha, shaandhaynta noocyada hoyga, shaandhaynta goobta, iyo shaandhaynta adeegyada. Guji xiriirka hoose si aad uga bilowdo HometoGo.
Hotels.com ayaa soo socota. Goobtan sare ee kirada fasaxa onlaynka ah sida goobaha kale ayaa bixiya xulashooyin hoy oo kala duwan. Waxay kaloo leedahay shaandheyn hoy oo ku taal bogga natiijada raadinta.
Liiskeeda, waxay soo bandhigaysaa natiijo liis wanaagsan oo daboolaysa heerka habeenka, qiimaha guud, adeegyada, siyaasadaha, sawirrada, qiimeynta martida, iyo macluumaadka goobta.
Faa'iido dheeri ah ayaa ah inaad abaalmarin ka heli karto goobta.
Dhinaca kale, hoos -u -dhaca dadka isticmaala boggan ayaa ka cawday in aadan xiriir toos ah la yeelan karin maareeyaha hantida ama milkiilaha. Sidoo kale, ma arki doontid khidmadaha ilaa aad gujiso batoonka “Aan buug -qorno”.
Ka sokow ballansashada duulimaadka iyo adeegyada kale ee TripAdvisor ay bixiso, waxay bixisaa adeeg kiro fasax oo heer sare ah. Tani waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah goobaha kirada fasaxa ee ugu qiimeynta wanaagsan oo mudan in la hubiyo.
Asal ahaan, goobtu waxay bixisaa liisasyo kala duwan, oo aad ku shaandhayn karto qiimo, tirada qolalka jiifka/musqulaha, masaafada u jirta astaanta, iyo arrimo kale oo badan.
Sidoo kale, waxaad leedahay sagaal shuruudood oo kala duwan oo aad ku beddeli karto sida ay isugu xigaan natiijooyinkaaga oo aad u fududayn karto. Si ka duwan Hotels.com, TripAdvisor waxay leedahay ujrooyinkeeda iyo canshuuraha si faahfaahsan.
Socdaalku waa ikhtiyaar kale oo mudan in la aado haddii aad rabto inaad ku dhowaad dhammaan ballansashadaada ku sameyso hal guji. Goobtan kirada ah ee fasaxa ah waxay ku bixisaa aragtida khariidada iyo liisaska boggeeda natiijada ugu weyn.
XIDHIIDHKA: Liiska Hubinta Marti -geliyaha Airbnb 2022: Ku hel Khibrada ugu Fiican Airbnb
Sida HometoGo, Tripping -ku wuxuu bixiyaa liiska huteelada la heli karo, hudheelada, guryaha, guryaha, iyo noocyada kale ee hoyga.
Si la mid ah Booking.com, Expedia waxay bixisaa noocyo hoy oo kala duwan. Waxaad ka heli doontaa sawirro, adeegyo, siyaasado, dib -u -eegisyo, iyo liiska meelaha soo jiidashada dhow.
Boggu wuxuu bixiyaa liiska kirada fasaxa iyo qiimahooda kala duwan. Waxay leedahay astaamaha shaandhaynta oo ka caawisa qof kasta inuu sameeyo raadinta si loo helo natiijooyinka xulashada ugu fiican.
Waxyaabo kale oo wanaagsan oo ku saabsan goobtan kirada ee fasaxa ayaa ah Haddii aad ku jirto niyadda aqal raaxo leh, degenaansho ballaadhan, ama villa aad u qurux badan, Expedia ayaa ku daboolay. Si aad u bilowdo guji xiriirka hoose.
Haddii aad la safraysid dhowr qof oo aad u baahan tahay boos kugu filan si aad u fidiso, markaa ballansashada kirada fasaxa Vrbo waxay noqon kartaa dariiqa loo maro.
Vrbo waxay kaliya ku bixisaa kirooyin fasax oo aan la isticmaalin shabakadeeda, markaa haddii aad isku dayeyso inaad la kulanto dadka intaad booqashada ku jirto, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad doorato degel kale.
Asal ahaan, Vrbo waxay bixisaa xulashooyin hoy oo aad u ballaaran sida hoy dhaqameedyo iyo is -kaashatooyin, doonyo, iyo bakhaarro.
Hoyga noocan ah, waxaad ku raaxaysan kartaa asturnaan badan sababtoo ah ma haystaan ​​martigaliyayaal nool ama meelo ay wadaagaan dhinacyo badan oo kiro ah.
#10. Sarrifka Guriga
Isweydaarsiga Gurigu wuxuu ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ee lagu kala iibsado kiraystayaasha fasaxa ee milkiilayaasha guryaha. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku beddesho gurigaaga qof kale gurigiisa meel kale oo adduunka ah.
Beddelka Guriga, ma bixin doontid lacag guri. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku beddesho guriga aad rabto inaad la joogto gurigaaga. Waqtigan xaadirka ah, goobtu waxay leedahay in ka badan 65,000 oo kiro ah 150 dal.
#11. Qoraalada fasaxa
Holidaylettings waxay ka mid tahay goobaha kirada fasaxa ee ugu fiican ballansashada safarka fasaxa. Waxay leedahay nidaam sugan oo fudud oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u samaysato ballansasho iyo lacag -bixin onlayn ah.
Boggani wuxuu bixiyaa liis bilaash ah oo aad ku xayeysiin karto kiradaada oo aan lahayn kharashyo hore. Waa inaad bixisaa 3% kaliya khidmaddaada hore marka dambe marka ballan -qaadkaaga la xaqiijiyo.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee goobtan kirada fasaxa ah ayaa ah in nidaamkeedu ku siinayo xorriyad iyo asturnaan si aad ugu sahamiso xawaarahaaga.
Waqtigan xaadirka ah, Waraaqaha Fasaxa waxay xayaysiiyaan 600,000 aqallo, guryo iyo guryo gaar loo leeyahay oo ku yaal 150+ waddan oo adduunka ah.
#12. Furaha rogay
FlipKey waa qayb ka mid ah TripAdvisor Rentals, oo ah suuq hormuud u ah kirooyinka fasaxa oo leh in ka badan 830,000 guri 190 dal. Macna ma laha nooca hoyga aad raadineyso, waxaad la kireyn doontaa TripAdvisor.
Iyada oo loo marayo TripAdvisor, waxaad sahamin doontaa ma aha oo kaliya meelaha ugu fiican, laakiin sidoo kale hoteellada ugu fiican, waxqabadyada, iyo hiwaayadaha, meel kasta oo aad tagto.
Wimdu waa mid ka mid ah goobaha kirada ugu fiican ee fasaxa guriga oo ku siin kara guri ka fog guriga oo leh qol kuu gaar ah iyo raaxo.
XIDHIIDHKA: 30 Fikradaha Sanad -guurada Jaceylka ee Saaxiibkaaga
Boggani wuxuu leeyahay wax kasta oo qof walba ku raaxaysanayo, laga bilaabo kirooyinka guryaha New York ilaa filooyinka hore ee badda Isbaanishka ilaa dabaqyada istuudiyaha Paris ee xiisaha leh.
Markaad ku ballansato Wimdu, kaliya ma heli kartid hoy ku habboon, laakiin waxaad sidoo kale ogaan kartaa oo aad la macaamili kartaa magaalooyin kala duwan si cusub oo xiiso leh, kana fog xumbo dalxiis.
#14. Isdhaafsiga Hoyga Jacaylka
Sida Is -weydaarsiga Guriga, Is -beddelka Guriga Jacaylku wuxuu ka mid yahay liiska goobaha is -weydaarsiga kirada fasaxa ugu fiican ee milkiilayaasha guryaha. Farqiga ayaa ah inay aad ugu eg tahay goob ganacsi.
Goobtaan fasaxa ah waxay siisaa isticmaaleyaasheeda guryo qollo badan leh oo ku yaal magaalooyin iyo tuulooyin badan.
taloWaxaa ku jira 2-toddobaad oo tijaabo lacag la'aan ah iyo khubaro saaxiibtinimo leh oo ka caawin kara inay helaan is-weydaarsi. Hadda, in ka badan 80,000 oo guri oo ku yaal 160 dal ayaa laga heli karaa goobtan.
Goob kale oo mudan in lagu xuso halkan waa Couchsurfing. Goobtan kirada ah ee fasaxa ah waxay kaa caawineysaa inaad hesho meel aad degto oo xitaa aad beddesho gurigaaga.
Sidoo kale, waxay kaa caawineysaa inaad la kulanto saaxiibo cusub adduunka oo dhan. Waqtigan xaadirka ah, maareeyayaasha Couchsurfing waxay abaabulaan dhacdooyin joogto ah 200,000 oo magaalo oo adduunka ah.
#16. Hub dhalaalaya
Haddii aad raadinayso waayo -aragnimo dhaldhalaalaan oo caadi ah ama qaadashada casriga ah ee fasaxa kaamamka soo jiidashada leh, Glamping Hub ayaa ku daboolay. Madalkani wuxuu bixiyaa iskudhafyo meelayaal dhaldhalaalaan oo qalafsan.
Waqtigan xaadirka ah, Glamping Hub wuxuu ka iibinayaa kirooyin raaxo leh 115 dal oo adduunka ah, iyadoo in ka badan kala bar hantidiisu ay ku taallo Mareykanka.
Natiijo ahaan, shabakaddu waxay ku habboon tahay adeegsiga fasaxa gudaha, halka kaydkeeda baaxadda leh sidoo kale laga heli karo waddamada sida England, New Zealand iyo Koonfur Afrika oo ka dhigaysa ikhtiyaar weyn safarada caalamiga ah.
Glamping Hub dhinaceeda waa in qaar ka mid ah hoygeedu ay yihiin rustic. Tan micnaheedu waxaa weeye in guryaha qaar laga yaabo inaysan lahayn qaboojiye ama helitaanka Wi-Fi.
Xiga liiskayaga meelaha ugu fiican ee kirada fasaxa waa Booking.com. Ka sokow waxay ka mid ahayd goobihii safarka ugu jaban, waxay kaloo bixisaa adeegyo kiro fasax.
Boggu wuxuu bixiyaa liisaska hantida oo bixiya macluumaad ku saabsan adeegyada la heli karo, dib u eegista martida, iyo xeerarka guriga.
Safarrada badankood waxay Booking.com ka dhigaan ikhtiyaarkooda maxaa yeelay waxay helaan xulashooyin hoy oo kala duwan. Waxay bixisaa liiska nooc kasta oo ah hoy, kiro fasax, iyo guryo.
Macna ma laha nooca hoyga aad rabto, doorashada mid kasta oo ka mid ah goobaha kor ku qoran ayaa kaa caawin karta inaad hesho guri u gaar ah fasaxaaga.
Talo soo jeedins
Dib u eegisyada Ganacsiga Adduunka 2022: Sca kale ee Adeegga Safarkam ama waa maxay?
10ka Makhaayadaha ugu Fiican Austin 2022
Caasimada Texas waxay u dhaqaaqday inay kusoo kordhiso cuntooyin kala duwan oo caalami ah oo laga keeno Aasiya, Talyaaniga, Afrika,…
10ka Makhaayadaha ugu Qaalisan Houston
Haddii ay dhacdo inaad joogtid Houston oo aad raadinayso makhaayad qaali ah oo qurux badan…